Kanye West's New Album Iyo Apple Music Yakadhonzwa Zvakasarudzika Zvichaburitswa Nyamavhuvhu 6 | Ndinobva mac
Vhiki rapfuura muimbi Kanye West akapa kunhandare yeMercedes Benz muAtlanta dambarefu rake idzva rinonzi Donda, albha iyo inofungidzirwa kuti inofanira kunge iri pamusika, asi nekuda kwezvikonzero zvisina anoziva, hazvizoite saizvozvo kusvika 6 inotevera Nyamavhuvhu.
Chiitiko ichi, chakatanga maminetsi zana negumi kunonoka, chakatepfenyurwa chaicho uye chete kuburikidza neApple Music, chiitiko icho sekureva kweTMZ chaive nevateereri vevanhu 110 miriyoni vanogara, vachiputsa zvinyorwa zvese zvekare zvepuratifomu iyi sezvo ichipfuura zvakapetwa rekodhi yayo yapfuura.
Ichitevera Kanye chegumi chealbum kukurudzira kusimudzira chiitiko, vateveri vanga vakamirira kuburitswa kweichi chitsva damba Kubva musi uyu, Kanye akaramba akanyarara pamasocial network, izvo zvakakonzera kuti Twitter izadzwe nenhamba zhinji yememes akaedza kutsvaga chikonzero chekunonoka kutanga.
Parizvino hatizive kana Kanye West anotanga kupa iyi nyowani dambarefu kuburikidza neApple Music chete. Aimbove mutambi webhasikiti Justin LaBoy anoti Kanye anoda kuendesa zvemhando yepamusoro zvinoita uye pari zvino ari kusanganisa nekugona dambarefu idzva iri.
Anotizve zvingangoita kuti dambarefu idzva iri harizoburitswa chete paApple Music, asi kuti kubva Nyamavhuvhu 6, ichave ichiwanikwa pane ese mapuratifomu emimhanzi. Iyo yekupedzisira inoita zvine musoro sezvo Apple kana Kanye vasina kuzivisa kuti kune chibvumirano chega.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » Noticias » Kanye West nyowani dambarefu rakasarudzika chete neApple Music rinoburitswa muna Nyamavhuvhu 6
Sonos neNorth Face Timu Kumusoro Kugadzira Iyo Yega Siteshi paSonos Radio: "Usamborega Kuongorora"